'အသက်အရွယ် ရလာတဲ့ အချိန်မှာ ဟာသဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ သဘာဝ အလှတွေကို ချပြချ? - Yangon Media Group
‘အသက်အရွယ် ရလာတဲ့ အချိန်မှာ ဟာသဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ သဘာဝ အလှတွေကို ချပြချ?
အင်းလေးဒေသရိုးရာဓလေ့များနှင့် သဘာဝအလှအပများကို မြင်တွေ့ခံစားရမည့် ‘လရောင်ဖြာတဲ့အင်းလေးမှာ’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာညွန့်မြန်မာညီညီအောင်က ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပြောပါတယ်။ ”အဓိကကတော့ ကျွန်တော်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာ ဟာသဇာတ်ကား တွေရိုက်ကူးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ သဘာဝကပေးထားတဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး သဘာဝကပေးထားတဲ့နေရာတွေကို ‘ကျွန်’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာတုန်းက တစ်ခါချပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ အင်းလေးက သဘာဝအလှတွေကိုချပြတာပါ။ ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာတွေကို ပံ့ပိုးမှုကောင်းကောင်းရှိတဲ့အတွက် ရိုက်ပြလို့ရတာပါ”လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင် မကောင်းဆိုးဝါးဇာတ်ကောင်နေရာကိုဖန်တီးခဲ့တာမျိုးလည်း ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ”အဲဒါကတော့ ရွာသားတွေကထင်တာကတော့ မကောင်းဆိုးဝါးပေါ့နော်။ ဇာတ်လမ်း ထဲမှာက နေတိုးရဲ့အဖေက ဆေးသုတေသနလုပ်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီး၊ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်တယ်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် စမ်းသပ်မှုလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ မကောင်းတဲ့ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကြားထဲမှာ နမမသမ ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ စမ်းသပ်မှုရဲ့ပြသာနာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အကောင်တစ်ကောင်ပေါ့နော်”လို့ ညွန့်မြန်မာညီညီအောင်က ပြောပါတယ်။ အင်းလေးဒေသကို အလည်အပတ်အနေနဲ့သာ ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့သူက ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကို အချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
”ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက် ရိုက်ကွင်းသွားကြည့်တဲ့အခါမှာ ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်။ နေရာတွေဘာတွေကိုလည်း အင်းလေးဒေသကို ဘုရားဖူးအနေနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ရောက်ဖူးခဲ့တာ။ အခုလိုမျိုး ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကျတော့ အင်းလေးဒေသခံတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတာ တွေလည်းရှိတယ်။ ပရိသတ်တွေကြည့်ရင်လည်း ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးဖို့ကိုစဉ်းစားခဲ့ကြတယ်။ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်တာကိုပဲ အချိန်တစ်ပတ်လောက်ယူပြီးတော့ ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်”လို့ပြောပါတယ်။ သူကဆက်လက်ပြီး ”အဓိက ဒီဇာတ်လမ်းလေးက မိသားစုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ မတူညီတဲ့ မိသားစုချစ် ခြင်းမေတ္တာတွေကို မြင်တွေ့ရမယ်”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေး၌ ဆေးလိပ်အရောင်း ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒထုတ်ဖော်၊ အလုပ်ထုတ်ခံ ရမှုနှင့်ပတ် သက်ပြီး လျော်ကြေး??